Kattenabc.nl prikbord • Toon onderwerp - Fantsona an-tserasera mba hahazoana vola feno
Het is nu ma 06 apr 2020, 07:36
door yortsreying8899 wo 12 feb 2020, 12:29
Milalao ny karazana filokana rehetra, raha toa ny mpilalao afaka mahalala teknika na fomba hahazoana vola an'io karazana filokana io, dia hampanan-karena azy ireo tsy hahalala izany. Ny paositra dia tsy maintsy mihodina ilay kodiarana ary mandray risika. Ahoana no hanaovana izany? Hanome fomba filalaovana izay manampy amin'ny kitapom-bolanao mora Gclub4laos.com foana izahay. Karazana milaza fa mahalala tsara izany satria tsy manana tsiambaratelo ho an'ny mpampiasa vola isika. Raha misy mieritreritra fa afaka manao izany izy dia afaka mandray ny volany amin'ny alàlan'ny famakiana miaraka amin'ireto paikady manaraka ireto.